သင်၏ Firefox Search Box ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ဖြင့်ပြုပြင်ပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 1, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မင်းဟာငါ့ဖြစ်ကြောင်းအခုမင်းသိပြီ .ရာဝတီ။ ငါ browser ကိုနှစ်သက်တယ်။ ပေါ့ပါးပြီးသုံးရလွယ်ကူတယ်။ ငါနှစ်သက်သောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိရှာဖွေရေးစာရင်းဖြစ်သည်။ ငါ၌ငါ့အကြိုက်ဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးရှိသည်နှင့်နောက်ကျောနှင့်လှန်လှန်နိုင်ပါတယ်။
Firefox အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းရန်၊ ထပ်ထည့်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် စာမျက်နှာကိုသင်ထည့်သွင်းလိုသောသူများကိုနှိပ်ပါ။
သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင် site အတွက်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ တကယ်တော့တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ် Search Engine plugins အတွက်ပုံစံသည် XML ဖိုင် (.src) နှင့်ပြသရန်ပုံပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီညငါအကြံဥာဏ်ရတယ် ငါ၏အ site ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စာရင်းသို့?
တကယ်တော့တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးလိပ်စာသည် (ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးအကွက်ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်) ဖြစ်သည် http://martech.zone's=something “ s” သည် variable နှင့်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ browser ထဲသို့ search engine ထည့်ရန်အသုံးပြုသော src file ကို dynamically generate လုပ်ရန် code အချို့ရေးသားခဲ့သည်။ ပုံစံကိုသွားရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ (သို့) ရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိပါက) ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင်ထည့်ပါ။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘလော့ဂ်ကိုနှစ်သက်လျှင် ယောဟနျသ Chowသင့်ကိုယ်ပိုင် John Chow ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသင်ထည့်နိုင်သည် s variable အဖြစ်! URL: http://www.johnchow.com/'s=something။ ကဲ့သို့ Problogger? မင်းတို့ထပ်တူထပ်တူထပ်ထည့်လို့ရတယ်။
Matt Cutts? URL: http://www.mattcutts.com/blog/ နှင့် s အဆိုပါ variable ကိုအဘို့။
စိတ်ကြိုက်မပြင်ဆင်ထားလျှင်၊ s WordPress ဘလော့ဂ်များအတွက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနိုင်သောအရာဖြစ်ပြီး၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မတ်လ 2, 2007 မှာ 12: 04 AM
ကျွန်ုပ်၏ Google CSE ကိုဤနည်းဖြင့်ထည့်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းကျွန်ုပ်မှာပြissuesနာများရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာပျောက်နေသနည်း။
မတ်လ 2, 2007 မှာ 8: 24 AM
ငါတကယ်နောက်တစ်နေ့ကြိုးစားသွားခဲ့သည်။ Firefox သည်အရင်းအမြစ်ဖိုင်အတွက်လမ်းကြောင်းကြေငြာမှုအတွက်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အဲဒါကိုလှည့်စားရတယ်။ တစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ရက်လောက်ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်။ ငါတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုငါကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ငါထင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ပြissueနာတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်။
မတ်လ 2, 2007 မှာ 10: 47 AM
အလွန်ကောင်းသောရှာဖွေမှု။ ငါအမြဲချိတ်ဆက်ဖို့ post ကိုရှာဖွေသွားနေပါတယ်, ဒီအချိန်အတန်ငယ်သက်သာလိမ့်မည်။
မတ်လ 2, 2007 မှာ 12: 38 pm တွင်
ငါကိုယ်ကျိုးအတွက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံရမယ်။ ငါသည်မေ့လျော့သောအရာတို့ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင် site ကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေပါတယ် 🙂
မတ်လ 2, 2007 မှာ 3: 50 pm တွင်
google site ရှာဖွေခြင်း (site: keyword ကိုသုံးခြင်း) သည်များသောအားဖြင့် WordPress internal search ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်။